Guddoomiyaha gobolka Bari oo sheegay in la fashiliyay qarax - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyaha gobolka Bari oo sheegay in la fashiliyay qarax
January 19, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa fashiliyay qarax, sida ay sheegeen masuuliyiintu.
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo loo yaqaan Dhedo oo shir saxaafadeed ka hadlayay maanta oo Sabti ah ayaa sheegay in qaraxa ay xalay soo qabteen ciidamada ammaanka.
Dhedo oo soo bandhigay qaraxa ayaa sheegay in uu ka koobanyahay walxo khatar ah oo haddii uu qarxi lahaa geysan lahaa khasaare badan.
Qaraxa ayaa la dhigay mid kamid ah waddooyinka magaalada Boosaaso, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolku.
Masuuliyiintu ma aysan sheegin cida qaraxaas doonaysay in ay qarxiso, balse xagjiriinta Al-Shabaab iyo Daacish ayaa qaraxyo horey uga geysatay magaalada Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa duqeyn uu ka geystay gudaha Puntland ku dilay saddex dagaalyahan oo katirsanaa Al-Shabaab, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen bayaan maanta oo Sabti ah. Duqeynta ayaa ka dhacday [...]
Washington-(Puntland Mirror) Dowladda Mareykanka ayaa jartay qeyb kamid ah caawimaada ay siin jirtay cutubyo katirsan milatariga Soomaaliya kadib eedaymo maamul xumo iyo musuqmaasuq ah oo ay sameeyeen ciidamada Soomaaliya, sida sargaal katirsan Waaxda Arrimaha Dibada [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Puntland ayaa sheegay in ay isku raaceen in laga hortago lacagaha kaashka ah ee lasoo gelinayo gudaha Puntland. Shirkooda asbuuclaha ah oo ka dhacay caasimada Garoowe oo uu shir guddoominayay Madaxweyne ku [...]